UFangoria Uletha Isimo Esesabekayo Esibukisayo 'Ngemuva Kokuzalwa' Empilweni - iHorror
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo UFangoria Uletha I-Horror Screenplay 'Ngemuva Kokuzalwa' Empilweni
UFangoria Uletha I-Horror Screenplay 'Ngemuva Kokuzalwa' Empilweni
ebhalwe ngu Sam Angelo September 12, 2018
Ukuba ngumzali kunzima kakhulu, ikakhulukazi uma kunguhlobo lwe-monster yaseFrankenstein yosana. Angikucabangi ukuzama ukuhlanganisa ingane yakho kusuka ekuqaleni (ngaphandle kokukhulelwa) kuwumsebenzi olula noma ohlanzekile. Kungakho ifilimu entsha kaFangoria Ngemuva kokuzalwa kuzoba yifilimu okufanele ibonwe abazali okungenzeka ukuthi bazakhele eyabo i-Franken-baby, kepha badinga amathiphu namasu okuthi bangayigcina kanjani iphila.
I-screenplay, ekuqaleni kukaLaura Moss (Usuku lokuthosa futhi Ukuvuka: Indaba Yenhlangano Yamalungelo Ezombie) noBrendan O'Brien (omakhelwane futhi Omakhelwane 2: Ukuvuka Kobudlova), Ngemuva kokuzalwa izobe iqondiswe nguMoss, ixhaswa ngezezimali yiFangoria, kubika Umnqamulajuqu. Kanye noMoss, Mali Elfman (Ngaphambi kokuthi Ngivuke) isethwe ukukhiqiza ngaphezu kukaDallas Sonnier (Ithambo Tomahawk futhi Ukudonshulwa Kuzozonkeno-Amanda Presmyk (I-Puppet Master: iLittlest Reich futhi Ukudonshulwa Kuzozonke) yeFangoria neCinestate. UFangoria uzoba nendima yabakhiqizi abakhulu abelwe uPhil Nobile Jr. (Iphrofayili Yokubulala futhi I-Halloween: Indaba Engaphakathikanye noClay Neigher (Ukwesaba kukaSathane (pre-production)). Ithimba elihlinzekiwe lizophatha le ngqungquthela ethinta umama nendodakazi yokuthokozisa ubuntwana nokuba nekhwalithi.
Isithombe sikaDallas Sonnier ngu-Ian Caldwell
Imininingwane nge UmnqamulajuquI-athikili, Ngemuva kokuzalwa imayelana nochwepheshe wamakhaza okwazi ukuvusa isidumbu sengane yentombazane; kodwa-ke, ngenkathi inzalo encane isaphila okwamanje, ayinakuphila ngezindlela zemvelo njenganoma iyiphi enye ingane esanda kuzalwa. Ukuze ugcine intombazanyana iphila, uchwepheshe waphenduka usosayensi ohlanyayo kumele aqoqe izinto ezidingekayo zebhayoloji ukuze anikeze iFrankenbaby. Ngenxa yalokho, izingxenye zezinto eziphilayo ezidingekayo ukugcina intombazane iphila kumele zivele kubantu besifazane abakhulelwe.
Isithombe nguDavid Bukach Photography
Ngeshwa ngo-Frankenstein wethu osemusha, umama wentombazane uthola ukuthi ingane ibuyiselwe ekuphileni ngendlela engekho emthethweni. Ngokuthokozela uchwepheshe waseMorgue, laba bobabili bayakwazi ukuholela esivumelwaneni esiqinisekisa ukuthi bazoqala uhambo lobusuku okungekho ukubuyela emuva kulo.
Ngemuva kokuzalwa ithembisa ukuba yisihogo esisodwa sohambo oluthokozisayo, ukuthatha okusha kwenganekwane endala yaseFrankenstein ephinde yabuyiselwa izikhathi eziningi. UFangoria ubuye wamemezela ukuthi bazokweseka uchungechunge lwamahlaya asabekayo aqukethe uBarbara Crampton, ongafunda ngalo udaba lwethu oluhlanganisa lokho lapha!
Ngemuva kokuzalwababiesizingane ezifileUFangoriaFrankensteinULaura Moss
Isigaba sokubhala sobuchwepheshe esivela e-Ohio. Ngingena: kumabhayisikobho, ekudlaleni imidlalo, ekufundeni (ikakhulukazi amahlaya nama-manga), ukucasula intombi nokubhala. Ezinye izintandokazi ezesabekayo / ezijabulisayo zifaka phakathi: I-Shining, i-Perfect Blue, i-Paranoia Agent, i-Alien (s), iNdodakazi kaBlackcoat, ne-The Texas Chainsaw Massacre (1974)
UDerek Mears Ube namahemuhemu okuthi uzodlala indima yesidalwa ochungechungeni oluzayo 'lwexhaphozi'
Ukubuyekezwa kwe-TIFF: UJeremy Saulnier 'Bamba Ubumnyama' uyi-Bleak Kahle